को हुन् अवैध सुन किन्ने यी ५ व्यापारी ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २९ वैशाख
सुनचाँदी व्यवसायीले ठूलो परिमाणको सुन अनौपचारिक माध्यमबाट किन्ने गरेका छन् । सुनचाँदी आयात गर्ने स्वीकृति वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै भए पनि केही ठूला सुन व्यापारीले अनौपचारिक माध्यमबाट सुन किन्ने गरेको पाइएको हो ।
संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै ठूला ५ सुन व्यापारीले खरिद गरेको सुनको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । यी व्यापारीले बैंकिङ माध्यमबाट किनेकोभन्दा पनि ठूलो परिमाणमा निजी व्यक्ति र व्यवसायीबाट किनेको पाइएको हो ।
‘सुन तथा चाँदीको आयात गर्ने स्वीकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र दिइएको छ, ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताहरुले बैंकिङ माध्यमबाट खरिदभन्दा पनि ठूलो परिमाणमा निजी व्यक्ति र व्यवसायीबाट खरिद गरेको देखियो,’ महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
कसले कति सुन कहाँबाट किने ?
महालेखाका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएको एक ज्वेलरी इन्डष्ट्रिज प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५४ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन किनेको छ । यसमध्ये सो ज्वेलरीले ८ करोड ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन बैंकबाट किनेको छ । बाँकी ८३.९३ प्रतिशत सुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सोही ज्वेलरीले आव २०७३/७४ मा ८६ करोड ५२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन किनेकोमा बैंकबाट जम्मा ९ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सुनमा मात्रै किनेको छ । बाँकी ८९.५८ प्रतिशत सुन व्यक्तिसँग किनेको छ ।
अर्काे एक ज्वेलर्सले आव २०७२/७३ मा ६५ करोड ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन किनेको छ । तर, सो ज्वेलर्सले बैंकबाट एक रुपैयाँको पनि सुन किनेको छैन ।
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत नै दर्ता भएको अर्काे एक ज्वेलर्सले आव २०७२/७३ मा १ अर्ब २० करोड १९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन किनेको छ । यो ज्वेलर्सले यसमध्ये ६ करोड ८६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन मात्रै बैंकबाट किनेको छ । बाँकी ९४.२९ प्रतिशत सुन व्यक्तिबाट किनेको छ ।
एक गोल्ड प्यालेसले आव २०७३/७४ मा किनेको १ अर्ब १ करोड ५२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सुनमा जम्मा १७ करोड १२ लाख ९४ हजार रुपैयाँको सुन मात्रै बैंकबाट किनेको छ । बाँकी ८३.१३ प्रतिशत सुन व्यक्तिसँग किनेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक ज्वेलर्सले आव २०७२/७३ मा ८९ करोड २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन किनेको छ । यसमध्ये ४.८१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन मात्रै बैंकबाट किनिएको छ । सो ज्वेलर्सले बाँकी ९५.१९ प्रतिशत सुन व्यक्तिबाट किनेको छ ।
राजस्व छलीको शंका
वार्षिक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सुन खरिद गर्ने ज्वेलर्सले ठूलो परिमाणको सुन व्यक्तिसँग खरिद गर्न आफैंमा शंकास्पद विषय भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘अर्बौं रुपैयाँको सुन किन्ने व्यापारीले व्यक्तिसँग यति धेरै सुन किन्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन, अवैध कारोबार गर्नेहरुसँगको कारोबार नै हो, हामीले त्यसरी हेर्न र भन्न नमिल्ने भएकोले राजस्वको विषय उठाएका हौं, राजस्व अनुसन्धान वा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध हेर्ने निकायले मिहिन ढंगले छानबिन गर्ने हो भने राजस्व उठ्ने मात्रै होइन, सुनको तस्करी पनि कम हुन सक्छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि सुनको यो प्रकारको कारोबारप्रति शंका गर्दै छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘पाँच करदाताले ६ आय वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँको सुन खरिद गर्दा ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ (९ प्रतिशत) को मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद भई ९१ प्रतिशत बाह्य निकाय एवं व्यक्तिबाट खरिद भएको छ, सुन तथा चाँदीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई तोकेको छैन, यसरी खरिद भएको सम्बन्धमा कर परीक्षणमा उल्लेख नभएकोले राजस्वमा परेको असर सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०४:३३:००
मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिने
स्थानीय मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर : स्थानीय तह